Xaasku shahwada ninkeeda ma iska ilaalinkartaa isaga oo aan ogeyn - iftineducation.com
iftineducation.com – Waa su’aal inta badan ay isweydiin karaan dadku balse ku saleysan diinteena islamka.
Waxaa jira xaasas sidaa ku dhaqma iyagoo is qiyaanaya laga yaabee in uusan guurkoodu ahayn mid ay ka leeyihiin u jeedo ah in ilaahey siiyo owlaad.
Waxaa marka hore haboon in laxuso in marnaba aysan naagtu iska ilaalin Karin biyaha ninkeeda hadiiba jimaac ama galmo dhacdo.
Uur qaadista Ilaah ayaa ayaa ku shaqo leh labada qof ee siku galmoonayana waxba kama badali karaan hadiiba mar la isku galmoodo sidaa daraadeed waxaa danbi wayn ah in naagtu ninkeeda ku qiyaanto cirbad ama si kale oo ay iskaga ilaalineyso biyaha ninkeeda.
Hadii aad isleedahay Uur maqaadaysid misaa sidaas uur ku qaaday iyagoon rabin in ay uur yeeshaan.
Hadii Ninka iyo xaaskiisu isku waa faqsanyihiin in aysan xiligaasi wax dhalin in kastoo ay tahay wax ay siku waafaqi karaan hadana wali meesha kama marna in dhalmada ama uurka uu ilaahey maamulo.
Mar Jawaabta su’aashaas oo gabar soomaliyeed ay nasoo weydiisay waxaan leenahay diintuna ay ka qabtaa in ay xaaraantahay in naagtu sameyso wax uusan ninkeedu raali ka ahayn oo aan ka ahayn Macsida alle.
Xaasku waxay xaq u leedhay in ay diido hadii ninkeedu yiraahdo aan kuu galmoodo iyada oo caadada cabta ama uu yiraahdo dabada aan kaaga galmoodo.